Akwụkwọ ozi e degaara Peter R. de Vries n'akwụkwọ ikpe Nicky Verstappen: Martin Vrijland
Akwụkwọ ozi e degaara Peter R. de Vries n'akwụkwọ ikpe Nicky Verstappen
gbara akwụkwọ Gbanwee NICKY	by Martin Vrijland	na 13 December 2018	• 13 Comments
isi iyi: 1limburg.nl
Ezigbo Peter R. de Vries, enwere mmasị dị ukwuu m soro usoro mgbasa ozi site na mgbasa ozi Nicky Verstappen, bụ nke a mara Jos Brech kpam kpam. Maka ihe doro anya: Abụghị m onye na-agbachitere Jos Brech ma ọ bụ nwatakịrị ọ bụla a na-emegbu ma ọ bụ onye gburu ọchụ. Otú ọ dị, o yiri ka okwu a ọ bụ ọrụ uche (PsyOp); ezubere ịgbanye site na DNA nchekwa data na wepu iwu nke na-egbochi iji DNA ahụ mee nchọpụta nke e nwetara ya. Gịnị kpatara nke a ji bụrụ ikpe? Nke a pụtara ìhè site n'aka onye ọka iwu Gerald Roethof.
Agaghị m ekwurịta banyere ike mepụtara ihe àmà, n'ihi na ọ bụrụ na nke a bụ Onyonyo, mgbe ahụ, 'ịme onye na-egbu ọchụ' nwere ike ịkwado ya mgbe niile na akụkọ ọma (tinyere ihe dị mkpa). O nweghị ihe ọ bụla iji lee ya anya, n'ihi na ịnwetaghị ihe akaebe ahụ. Otú ọ dị, nchebe Roethof na-egosi n'ụzọ doro anya na nke a bụ PsyOp. Ọ bụrụ na nke a bụ PsyOp (m ga-egosikwa gị ya) nke a pụtara na i nwere ọrụ dị njọ n'ịkwalite iwu nke dị egwu nye ndị mmadụ. Nke ahụ mere ka ọrụ gị dị njọ. Ị bụ n'ezie onye sabo.
Ihe ngosi nke akaebe
E nwere iwu na Netherlands nke na-ekwu na DNA nwetara na ikpe A nwere ike ghara iji ya mee ihe. Iri iri abụọ mgbe Nicky Verstappen nwụsịrị, ikpe ahụ na-atụ egwu ịkwụsị. Nke a bụ n'ihi na a gaghị ele ikpe ahụ anya dị ka igbu ọchụ ma ọ bụ ikpe mkpogbu mmadụ, nke a ga-esi na ya mee ka njedebe oge ahụ dị. N'okwu ahụ, ị ​​nwere ike ịkọwa na ọ bụ ihe dị nnọọ iche na mberede na-eche na a na-enyo enyo, mana m na-ahapụ nke ahụ maka oge.
Jos Brech ga-efu na mberede. Anyị agaghị agbachapụ akụkọ ahụ kpamkpam, n'ihi na nke a zuru oke na mgbasa ozi ma anyị enweghị ike ịlele ma ọ bụrụ na ọ bụghị naanị ntụgharị.
Ka anyi debe ya. Ikpe ziri ezi zukọtara DNA nke Jos Brech na ọnọdụ efu a. Ka anyị kpọọ na dị ka ikpe A. Mgbe ahụ, a na-eji DNA a mee ihe n'ọnọdụ B, bụrụ ikpe Nicky Verstappen. Nhọrọ maka nke a bụ n'ezie (mmetụta) iji ree ndị mmadụ nke ọma, n'ihi na "N'ikpeazụ, anyị enweela ike ịhụ onye na-eme ka Nicky Verstappen nwụọ!"Ma nke ahụ abụghị ihe ọ bụla karịa mmetụta, n'ihi na ọ dịghị mgbe e gosipụtara igbu ọchụ ma ọ bụ igbu mmadụ, dịka mmegbu. Otú ọ dị, achọghị m ka a nwaa m n'ime ntụgharị uche nke PsyOp maka nkwurịta okwu a. Gerald Roethof na-eme nke a nke ọma.
Ihe akaebe na Roethof bụ ọkàiwu PsyOp bụ nke a: DNA nwetara na ikpe A gaghị eji ya mee. Nke ahụ bụ iwu. Eziokwu dị mfe na ọ dịghị onye ọ bụla na-eme mkpesa na usoro ikpe dum megide iji DNA nwetara n'ọnọdụ ikpe A maka ikpe B na-egosi na anyị na-emeso otu ọmịiko.
The show ụnyaahụ, ebe Roethof kwalitere ntọhapụ nke Jos Brech dabeere na ọtụtụ substantive arụmụka banyere ọkọdọhọ nwa-akpali agụụ mmekọahụ na kọmputa, echiche na kwesịrị support DNA na-egosi na na, bụ ihe ọ bụla karịrị show maka ogbo. Roethof nwere Jos Brech ya bụ ozugbo na ike ugbua ga-esi n'aka ụbọchị 1 si mkpọrọ (dị ka ọ ga-enweghị patsy ndị na arụ orụ egwuregwu), site pụta ìhè na iwu (nke ka na ike), nke kwuru n'ụzọ doro anya na DNA nwetara ikpe A, enwere ike ghara iji ya mee B. Nke ahụ ga-emebi iwu ahụ.
N'ezie i nwere ike ikwu: "Ee, ma ọ bụrụ na Jos Brech mara ya ikpe, aghọtara m na Onye Ọchịchị Ọchịchị na-atụgharị anya". Ma, anyị nwere ike ịjụ ajụjụ a ma ọ bụrụ na okwu a bụ PsyOp gbasara ịkwụsị iwu a? Gịnịkwa pụrụ ịbụ nsogbu maka onye ọ bụla?
Ọ bụghị naanị na ikpe a, ma ọhụụ na-adị na mberede na-edozi ya na okwu nrọ DNA. Mgbe ọtụtụ afọ nke nnyocha na-emegiderịta nmepe bụ na mberede a na-enyo enyo dabeere na DNA na-egosi agwụ elu n'azụ Ogwe. Nke a na-enwe mmetụta siri ike site 'ime onye ogbu mmadụ,' maka ịnakwere okwu anwansi ahụ: DNA. Anyị steamed nwayọọ nwayọọ otú njikere maka nnabata nke a mba DNA database n'ihi na anyị na-uche na-egwuri na ihe n'ụzọ mmetụta uche ike mmetụta. O doro anya na i tinyewo òkè dị mkpa na Pita, n'ihi na ị nwere ike ikwu okwu nke ọma ma na-ehichapụ ezé gị nke ọma.
Egwuregwu nke ịmepụta nsogbu onwe onye, ​​wee sụgharịa mmeghachi omume ahụ site na ntanetị mgbasa ozi, wee webata ngwọta ahụ (Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta), nwere ike iyi ihe na-adịghị njọ. Ị nwere ike ịsị na njedebe na-eme ka ihe dị mma, ọ bụghị na ihe mgbaru ọsọ kwesịrị ịbụ ihe dị omimi karịa ịnụ na ịhụ ndị mmadụ. N'ezie ọ ga-adị ebube ma ọ bụrụ na niile igbu ọchụ na-ókè mgbe ike-ozugbo edozi site DNA, ma e wezụga eziokwu na-akwado àmà na-egosi bụ ka nnọọ uru, anyị nwere mee ka anyị ikekwe n'ezie mgbe nchegbu banyere ihe nwere ike ime eme na DNA ozugbo ọ dị na nchekwa data mba.
Wepu ojiji DNA iwu
Ma n'ebe ahụ, mkpa nke a na-egbuke egbuke na mberede na-aghọ kristal doro anya! Mwepụ nke ókèala maka iji DNA mee ihe bụ ike isi nke Nicky Verstappen - Jos Brech. Ozugbo e nwetara DNA, enwere ike iji ya mee n'ọdịnihu n'enweghị ihe mgbochi ọbụla. Onye na-akwado Gerald Roethof lekọtara nke ahụ site n'ịghara ịkpọ iwu a. Gị onwe gị, Peter, na-arụ ọrụ dịka onye nkụzi na-ewuli elu, na TV na Twitter dịka ngwá agha kachasị mkpa gị. Ị na-egwu ndị mmadụ ma kwadebe ha maka ịnakwere ihe ha na-eleghara anya. Ya mere, ozugbo DNA nọ na nchekwa data nchekwa ụwa, gọọmentị nwere ike ime ihe niile na ya. N'ezie, foto a ugbu a na-akọwa na nke a ga-emetụta nanị azụmaahịa Nicky Verstappen, mana nke bụ eziokwu bụ na ókèala adịkwaghịrịrị na ọ dịghị onye na-ahụ ihe ndị ga-esi na ya pụta.
Na DNA onye ọ bụla na nchekwa data nke obodo, steeti nwere ike itinye ọnụma mkpụrụ ndụ zuru oke nke nwa amaala ọ bụla. Nke a pụtara na e nwere ike nyochaa mkpụrụ ndụ niile. A na-ahapụ nke a site na ugbu a, n'ihi na ewepụrụla ọnụ ụzọ iwu (na nke a na-agbapụ). Na Nchikota na ndị ọzọ nile na Big Data Ịchịkọta ọchịchị nke ndị mmadụ (na-eche mmadụ mgbasa ozi omume, ndidi na ndekọ, revenue, mmefu, ụtụ isi na otú pụta na na) na i nwere ike mgbe ahụ na-amalite na-ejikọ nnọọ mgbagwoju anya àgwà na àgwà ụmụ mmadụ na mkpụrụ ndụ ihe nketa e ji mara. Kwupu ị na ugbu a ala nke ihe ọmụma na ebe ndị dị otú CRISPR mkpụrụ ndụ ihe nketa CAS 'chọta na-eji dochie arụmọrụ gbanwee DNA, mgbe ahụ, nekpughe a nwere ga-eme n'ọdịnihu na dịruru ná njọ ebe bio-mgbanwe nke ndị mmadụ n'otu n'otu bụ na o kwere omume.
Gị Peter, ị nwere ike ileghara nke a anya dịka ịghọ aghụghọ, ma ị ghaghị ịkasi akọ na uche gị obi. Onwe m, echere m na ị maara kpọmkwem ihe agbata na-akpata nke a. Ị na-eme ya maka ego na oke mma BMW gị?
Ụdị isi nke ala
Iwu inye onyinye na-eme ka ahụ doo anya na ahụ bụ iwu n'ụzọ iwu. Ị nwere ike ikpebi ikpe ma ọ bụ ịghara inyefe akụkụ ahụ mgbe ị nwụrụ, site na ịhapụ nke a na nchịkwa obodo. Na ihe niile nke steeti, steeti nwere ike ịrụ ọrụ. Ya mere ọ bụrụ na ị tụlee ahụ mmadụ dị ka ala ala, ma ị nwere profaịlụ DNA nke ndị mmadụ n'otu n'otu, ị nwere ike ikpebi ịnọgide na-enwe (na-enweghị ikike). Nke a bụkwa ihe gbasara ụlọ gọọmentị na ụzọ obodo na ihe ọ bụla dabara n'okpuru ọchịchị. N'izu, ị nwere ike ikwu na mgbe netwọk okporo ụzọ na-ere, ala nwere ike iche na a na-akpọ ya ka ọ bụrụ ihe ọhụụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na otu n'ime ala na-amalite igosipụta esemokwu, steeti nwere ike tinker na ya. Dị ka ọmụmaatụ, enwere m ike iche na ị na-enweta ndị nnupụisi site na nyocha nnukwu data. Ọ bụrụ na ị nwere ha DNA profaịlụ na mba nchekwa data, i nwere ike n'ụzọ iwu kwadoro iji na DNA iji mepụta a ahaziri ogwu, na ị na-eme mgbanwe ụfọdụ na DNA site na CRISPR CAS usoro, ekwe ka ị gbanwee onye dị otú ahụ. Ị dị, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, na-eduzi nrụzi na akụ gị.
N'ihi ya, m na-ese ya niile n'ozuzu ya karịa ihe a na-ekwu na Jos Brech yiri. Ọdịdị ahụ nke gị na ndị mgbasa ozi na-akpọte bụ na ọ dị mma na anyị nwere DNA nke onye ọ bụla, n'ihi na mgbe ahụ, a ga-edozi nnukwu ikpe mkpegbu ngwa ngwa. Otú ọ dị, ihe ọ pụtara bụ ihe ka ukwuu. N'ihi na Gerald Roethof anaghị edozi iwu iwu megidere iji DNA maka ikpe A maka abamuru nke B, ụda amaala. Nkọwa DNA nke onye ọ bụla ga-ekwu ngwa ngwa ikwu na ala agaghịzi enwe nchegbu maka ajụjụ nke ihe ọ na-eji maka ozi ahụ.
Ya mere ọ bụrụ na ị na-enwe ike nwere ndị mmadụ na-elekọta mmadụ, àgwà psychological larịị site nnukwu data si na-elekọta mmadụ media na ndị ọzọ nile ọmụma na ị na ikpokọta na ihe ọmụma na DNA database, ọ bara uru ma ọ bụrụ na iwu ị na-ama na-akpata na ị nwere ike ijikwa ala ndị a n'enweghị ihe mgbochi ọbụla. Ọ dị mma na e nwekwara iwu nke na-eme ka o kwe omume itinye agịga injection n'ime nwa amaala ọ bụla; ma ha chọrọ ya ma ọ bụ. Ọ bụ ya mere yiri nnọọ na kpuchie nile iberibe na ebe-na bụla ụka na anyị na-ahụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ media, iji kwadebe maka mgbanwe nke ga-enwe ike inwe anyị n'ime anyị DNA.
Ọ bụrụ na ị nwere onye ọ bụla mkpụrụ ndụ ihe nketa na profaịlụ kaadị na ị nwere ike iwunye a ogwu iwu nnukwu amanyere bụ iwu ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ndị mmadụ, ya mere ị pụrụ ịkwa akwa (CRISPR CAS) mgbanwe ime gị ala akụ.
N'ezie, achọrọ m ịkele gị, Peter R. de Vries, maka itinye aka dị mkpa maka mmepe a dị egwu! M ga-achọ ịhụ ya n'ihi ihe ọzọ karịa na oppositional imewe aghara, nke m na-ata ahụhụ si na-arahụ kenyere n'ime m mụrụ. Echere m na otu ọha mmadụ jupụtara na ígwè ọrụ ntanetị nke naanị na-ehicha ee, na-arụ ọrụ nke ọma karị. M were a ụwa ebe niile mmebe ụmụ ọhụrụ a obere Peter R. de Vries nwere DNA, otú ahụ ka anyị na-ahụ naanị ọnụ ọchị gị Prodent na TV show A ma ọ bụ B, ma dị nnọọ n'ebe nile! M were a ụwa jupụtara na mma n'anya puppets nke ala, mgbe nile akụkọ ihe mere eme na-akụziri anyị na ike omume na-adịghị otú anyị nwere ike na-enyefe akara anyị DNA n'ezie mma na gị popet egwuregwu.
Daalụ Pita! Na-ekele ekele Gerald.
Tags: DNA, agba, Jos B. Jos Brech, mmegbu, ikpe ikpe, Nicky Verstappen, uwe, Peter R. de Vries, ikpe
13 December 2018 na 13: 50
Ị gaghị enwe ike ịjụrụ ọkàiwu Roerhof okwu. Adreesị ozi-e Ziin na ebe nrụọrụ weebụ ya.
Jụọ ya ajụjụ banyere agbachitere ya?
13 December 2018 na 13: 55
Ha na-agụ nke a ...
13 December 2018 na 16: 23
Ejila "ihe atụ" mee ihe nhụsianya!
13 December 2018 na 19: 04
Ọ ga-adị mma ịgbaso ikpe gbasara "German Maddy" iji chọpụta ihe yiri ya. Tụkwasị na nke a, ọhụụ mgbasa ozi niile ga-enwe ike idozi okwu Bekee nke Maddie dịka otu echiche ahụ si dị.
Arie dere, sị:
13 December 2018 na 19: 40
Kọwaa Martin! M na-eche ma ọ bụrụ na onye mba ọzọ nwere ike ileta nwoke a nọ n'ụlọ mkpọrọ, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ onye òtù ezinụlọ. Adịghị m eme ihere. Ma ọ ga-aga ileta ma ọ bụrụ na ọ bụghị (ikpe) mara ya?
13 December 2018 na 19: 45
O yighị ka ọ bụrụ na ị bụghị ezinụlọ maọbụ ihe. Ọ bụghị onye ikpe mara karịa ikpe site na mgbasa ozi.
Ma n'ezie, ịchọrọ ịhapụ onye ọ bụla dị ka o kwere mee.
Anaghị m ahụ isi na ya.
14 December 2018 na 06: 54
Njikọ na ozi maka ịga leta ndị eji eji
https://www.dji.nl/contact/contactmeteengedetineerde/index.aspx Ị ga-ama ebe ọ nọ, ọ ga-amasịkwa ịgwa gị okwu. Ya mere, ọ naghị adị mma ma ọ bụrụ na onye ọka iwu ya kwadoro nke a na ihe gbasara 'nchebe' dị mma. Kuch, ụkwara tickling.
14 December 2018 na 10: 12
Mgbasa mgbasa ozi nile: ọ bụ mmetụta uche maka onye ọhụụ ọzọ ma n'oge ugbu a, Netherlands dum na ụdị ihu abụọ kachasị njọ na-ekpuchi ndị nicky n'ime ahụ anya. N'agbanyeghị eziokwu nke akụkọ dum)
Ọ bụ ịda mbà n'obi na a na-ewetara 17mlj NLérs ụdị ihe a site na ike TV na TV, ọ bụ na ị na-arịa ọrịa n'oge mbụ. Mgbe ọzọ, n'usoro ihe omume ahụ, okwu mkparịta ụka na-adaba na onye ọhụụ, ma ya mere na nkedo ether na ndị na-ekiri ihe niile. (a na-akpọ hypnation na)
The ise okwu banyere ndị underpants, briefs underpants Nicky a na-akpọ ya mgbe na nkezi onye na underpants nke Nicky hypnotized ya retina na ike na-eche ihe ọ bụla ọzọ. Ma ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụ na ị ka na-ele obere skecastic obere ala pulp.
Lee film na na njikọ n'okpuru, na analysis of a blogger, anyị na-adịghị ahụ na mainstream, ọ dịghị, anyị na-ahụ naanị okwu underpants, nwoke ọ bula na emo-ụlọ na-akpọ ha chefuru ime ka Spain, zum puke nke tafrelen ... (na-apụghị ịghọta na ndị dị otú Jeroen Pauw ọbụna ihere zolangzamerhand agbajikwa n'ihi na ọ maara na ọ na-agbagharị ndị sabo ìgwè nke de Vries na nwunye)
Lee foto vidio agbakwunyere isiokwu njikọ n'okpuru isiokwu Minute 15.05: kpọọ oku ma n'otu oge ahụ gbasaa asụsụ ọkụ na ntị ndị na-ekiri. (elu nke ihu abụọ)
N'akwụkwọ akụkọ a, ha na-agbaghakwa maka okwu underpants
14 December 2018 na 21: 08
Igwefoto kacha mma,
Biko ka m gbakwunye ya na nke a
15 December 2018 na 11: 44
Ụdị nke Vries ee gịnị ka ị ga - eme .. gịnị ka ọ ga - agwa ụmụ ụmụ ya ma ọ bụ ..
Elien dere, sị:
19 December 2018 na 09: 19
Anyi nwekwara otu onwu-ajuju nke a na-akpọ igbu onwe ya maka Wassenaar. Anass Auragh.
Ndị hụrụ n'anya nke ụwa hà ka na-apụ n'ụlọ ruo ọtụtụ ọnwa?
Enwere ike idozi nke a n'ime afọ 20.
8 March 2019 na 16: 25
Naanị gụọ na Rkethof chọrọ ego ka ukwuu. Ọ na-arụsi ọrụ ike ma na-akwụ ụgwọ ya ntakịrị maka ya. Ọfọn, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'ime usoro ahụ, ị ​​ghaghị mkpesa gbasara iwu ndị metụtara ego gị. Ya mere echela.
Mgbe ahụ, ọ ga-apụ ma mee ihe ọzọ. E nwere ọtụtụ ndị ọkàiwu nke dị njọ. Anaghị m ekwu na ọ bụ ajọ njọ js.
Ọtụtụ ndị ọkàiwu bụ ndị ọkàiwu n'oge okpomọkụ. Anaghị m asị na ọ bụ ọkàiwu zombie.
5 June 2019 na 10: 17
Oge ọzọ taa, biko mara
Ya mere, ngwa ọchụchọ ahụ bụ ihe na-efu DNA, ọ bụghị banyere ndị mmadụ ọzọ
Onye a na-enyo enyo 56 anaghị etinye aka na ya. Ma n'ihi na ezinụlọ ya kọrọ na ọ na-efu ma na-eziga ihe ndị DNA na-enye ndị uweojii, 100 percent DNA match arrived. A chọpụtara DNA DNA n'uwe nwata ahụ.
Roethof nwere àgwà ihu abụọ ya nke na-eme ka ọ bụ ezigbo ọkàiwu,
Ndị na-eme ihe edere ederede na-akwụ ụgwọ nke ọma na ụwa a, ha kwesiri ka a na-akwụ ụgwọ (tomato na àkwá, gụọ isiokwu ahụ n'elu, mgbe ahụ ị maara ihe mere)
" The Jos Brech: "Mkpesa ikpe" naanị mgbe okpomọkụ 2019
Akwụkwọ ozi a na-edeghị akwụkwọ na Mark Rutte: Ezigbo Dutch »
Nleta nile: 16.021.339